Muuri News Network » Maxaa u sabab ah Fashilka Amisom ka soo Wajahay Gobolka Shabeellaha Hoose?..
Maxaa u sabab ah Fashilka Amisom ka soo Wajahay Gobolka Shabeellaha Hoose?..
Kooxda Alshabaab ayaa Todobaadyadii ugu dambeeyay dib u qabsanayay deegaano dhowr ah oo ciidamada AMISOM isaga baxayeen, waxaana ugu dambeeyay deegaanka Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose, halkaasi oo ciidamada Uganda lagu dilay kadib weerar qorsheysan oo Alshabaab ay ka geysteen deegaanka.
Saraakiisha falanqeysa arimaha amaanka ayaa sababo kala duwan u yeelay waxyaabaha qasbaya in ciidamada AMISOM ay ka baxaan saldhigyo badan oo Shabeelaha Hoose ay ku lahaayeen.
1 Dadka oo ciidamada AMISOM ka baqaya!
Marka loo eego dadka ay la joogaan ciidamada AMISOM waxaa heysa baqdin xoogan oo kuma kalsoona ciidamada AMISOM, waxaana marar badan dhacday in AMISOM ay dilal kala duwan u geysato dadka shacabka ah, taasi oo kalsoonida sii lumisay.
Qaar kamid ah dadka ku sugan deegaanadii ugu dambeeyay ee laga saaray Alshabaab ayaa ka hadlay aragtidooda, waxayna sheegeen in AMISOM iyo Al-shabaab aysan waxba u kala dhaamin, taasi oo qasabtay iney Al-shabaab mararka qaar u sacab tumaan.
2 Tababar la’aan
AMISOM oo taageero ka hesho Midowga Africa ayaa lagu dhaliilaa in ciidamada ugu badan ee loosoo diro Soomaaliya aysan laheyn tababar buuxa oo dhanka Militariga ah, waana tan qasabta in Al-shabaab ay kaga awood badnaadaan dhanka dagaalka dhulka ah.
3 Xiriir la’aanta AMISOM dhexdeeda
La dagaalanka koox kasta oo argagixiso ah, waxaa loo baahan yahay ciidan iyo agab ciidan si loo difaaco weerarada ka imaan kara Al-shabaab, ciidamada AMISOM ayaa marar badan waxay dhibaato kala kulmeen la’aan agabka ay u baahan yihiin si ay ula dagaalamaan Alshabaab.
Sidoo kale yaraanta xiriirka ka dhaxeeyo AMISOM ayaa loo sababeynayaa in weeraro Alshabaab ku qaadaan saldhigyada AMISOM weerarada dhulkana kaga adkaadaan.